Home News Maxay Dastuurka iyo Sharciyada Caalamiga ah ka qabaan Dhiibistii Qalbi-Dhagax ?
Maxay Dastuurka iyo Sharciyada Caalamiga ah ka qabaan Dhiibistii Qalbi-Dhagax ?
Iyadoo dhowaan Dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa Jabhadda ONLF ayaa arrintaas waxa ka dhashay buuq farabadan.
Haddaba waxan halkan idin kugu soo gudbineynaa Warbixin Xasaasi ah oo ku saasban waxa Dastuurka Soomaaliya iyo Sharciyada Caalimiga ah ay ka qabaan Dhiibista Qalbi-dhagax.
Halkaan hoose ka daawo Warbixinta.
Previous articleRW Kheyre oo lagula taliyay in uu iscasilo, iyo dadaallo socda sidii loogu qancin lahaa.
Next article[Qormo Xasaasi ah] Kii warqadda dhiibay aragnaye, kii qof dhiibay maxaa lagu xukumi?.
Faahfaahin:-Kooxda Xuutiyiinta oo Dhowr Gantaal Kusoo Tuurtay Soomaaliland!!
Madaxweynaha Dalka Jabuuti Oo Fariin Adag U Diray Ciidamada Jabuuti Ka...